Home > Tigidhada Tareenka OBB ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Tareenka OBB wuxuu si isdaba joog ah ugu socdaa Vienna – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – St. La codeeyay, Graz - Salzburg. Waxaad sidoo kale ku tegi kartaa waddamada deriska ah ee Yurub gudaheeda adoo adeegsanaya tareenka OBB.
Tigidhada tareenka OBB waa ka raqiisan inta lagu jiro xilliyada ugu sarreeya, bilowga toddobaadka, iyo maalintii. Waad iska hubsan kartaa inaad heleyso tigidhada tareenka ka jaban toddobaad gudihiis. Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, Tigidhada tareenka OBB ayaa ah kuwa ugu dhaqaala badan. Sababta oo ah mugga socdaalayaasha ganacsiga ee shaqada tagaya subaxa iyo fiidka, tikidhada tareenka ayaa ka qaalisan. Way ka jaban tahay inaad safarto waqti kasta inta u dhaxaysa safarka subaxdii iyo fiidkii. Usbuuc-dhamaadka waa waqti kale oo ugu sarreeya oo loogu talagalay tareennada, gaar ahaan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. OBB train ticket prices also increase on ciidaha dadweynaha iyo ciidaha iskuulka.
Tigidhada OBB Komfort waa tikidhada OBB ee caadiga ah, waana lasiiyaa isku xirka tareenka habeenkii. The OBB Komfort ticket covers the cost of the journey, Boos celinta nooca safarka ee la xushay, iyo quraac qolka hurdada.
Rakaabka ayaa iibsan kara Osterreichcard Classic. Iyada oo wata Osterreichcard Classic, waxay heli doonaan qiimo dhimis 100% on the cost of seat reservations for 1st and 2nd class. With an Osterreichcard Classic 2nd class, aad hesho a 50% sicir-dhimis isbeddelka fasalka laga bilaabo fasalka 2-aad ilaa kan 1aad oo leh tikid caadi ah oo nooca caadiga ah ah.
In Linz, Maalmahan tareenka OBB ka tag oo ka imaada Xarunta Dhexe ee Linz (Saldhigga dhexe ee Jarmalka wuxuu la mid yahay Hauptbahnhof), meel aan ka fogayn wabiga Danube.
Waxaad karaa boodaok a waan ogahayat ka hor gudaha OBB tareenada loogu talagalay 3 euros. Waxaad doono hel shaqsi kursi ka dib markii la sii qabsado.